बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दै डा. केसी, होसमा हुन्जेल आइसियूमा नजाने अडान
साउन २९, २०७४ सोमवार ०२:१३:०० प्रकाशित
काठमाडौं– २१ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मुटुको चालमा निकै गडबढी आएपछि डा‍. केसी आइतबार बिहानैदेखि मौन रहेको उनको निगरानी गरिरहेका डाक्टरहरु बताउँछन्। कसैसँग बोल्न खोज्दा मात्रै पनि मुटुको गति दुई सय प्रतिमिनेटभन्दा माथि पुग्ने गरेको बताइएको छ। सामान्य मानिसको मुटुको गति प्रतिमिनेट ७० देखि ८० को बीचमा रहन्छ।
आइतबार साँझ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल डा. केसीलाई भेट्न अनशनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका थिए। नेता पौडेलसँग थोरै बोल्ने प्रयास गर्दा सास फुल्नुका साथै मुटुको गति अचानक दुई सयभन्दा माथि पुगेपछि डा. केसीले बोल्न सकेनन्। नेता पौडेलले डा. केसीको स्वास्थ्यबारे डा. केसीको निगरानी गरेर बसेका डाक्टर र सहयोगहरुसँग सोधपुछ गरेका थिए।
नेता पौडेलले डा. केसीका माग पूरा गर्न र अनशन तोडाउन आफ्नो तर्फबाट भरपूर प्रयास गर्ने बताएका छन्।
उपचारमा संलग्न डा. प्रदीपकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार डा. केसीलाई बेला–बेलामा छातीको बीच भागमा असह्य पीडा हुने गर्छ। उनले भने, 'अक्सिजन स्याचुरेसन निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ, जसले गर्दा एकैछिन पनि अक्सिजन माक्स नलगाई बस्न सक्ने अवस्था छैन।'
रगतमा म्याग्नेसियम, पोटासियम, क्याल्सियम, फोसफोरसको मात्रामा कमी भइसकेको र सेतो रक्तकोशिकाको संख्या निरन्तर घट्दो अवस्था रहेको डा. श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा यस्तो प्रकृतिको बिरामीलाई आइसियूमा राखेर उपचार गरिन्छ। तर डा. केसीले आफू होसमा रहुन्जेल कुनै पनि बहानामा आइसियूमा नजाने अडान लिएका छन्। त्यसैले तत्काल ज्यान बचाउन आवश्यक पर्ने 'डिसी सक' मेसिन र भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राखिएको छ।